August 2013 | IT Sharing Network
Wordpress Installation guide (ကိုယ်ပိုင်Blogတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း)
ကိုယ်ပိုင်Blogတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း တွင် Aပိုင်း ( ) Localhost ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခြင်း
(က) Xamp installation
( ခ ) Wordpress instllaion
Aပိုင်း (+) မိမိBlogကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း
(က) Post တင်ခြင်း
( ခ ) Themes installation
(0) Aသုံးပြုပုံများ
အထက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Firefox ကိုကလစ်ပြီး Help >>> Troubleshooting ကို click ပါ။
ပွင့်လာသော Page တွင် Reset Firefox ကို click ပြီး Reset လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ထွက် Kaspersky Keys အသစ်လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကီးထည့်ပုံကိုလည်း အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Kaspersky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox Download ကို click ပြီးယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခု Kaspersky Keys for All Product Kaspersky ကို Sharebeast မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Kaspersky Internet Security 2014 For3Months License Key နှင့် Key ထည့်နည်း
What’s new in Kaspersky Internet Security 2014 ?
· Optimization of the user interface, settings, etc. according to the custom research.
· Touch Screen support.
· More banks and web stores support.
· The ability to select the browser when working with Safe Money.
· Connected Standby Technology Support.
· Reduced computer resources usage.
Kaspersky 2014 14.0.0.4651 Final (Internet Security + Anti-Virus)
Kaspersky အသုံးပြုတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် Kaspersky 2014 (Internet Security + Anti-Virus) ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုလိုရာကို ရွေးချယ် Download ယူနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Key အတွက်ကတော့ Kaspersky Trial Reset ကို ဒီနေရာမှာ Download ယူနိုင်ပါတယ်။
Kaspersky Internet Security 2014 14.0.0.4651 keeps your PC safe from all viruses and Internet threats. It isafull security solution that rigorously protects your files and your identity from cyber criminals and the latest malware attacks. By combining cloud-based functionality and powerful security technologies that run on your PC, Kaspersky Internet Security 2014 delivers more effective defences against today’s increasingly complex threats !
Kaspersky Trial Reset ဆိုသိကြပြီးသားပါ kaspar ကို trial အနေနဲ့သုံးပြီး သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ရက်ပြည့်ကာနီးရင် Reset ပြန်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းပါ ထည့်ပေးထားပြီး လိုရမယ်ရ ဆောင်ထားချင်ရင် ဆောင်ထားနိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.17 Build 8 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build 14 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
Huawei တွေ Firmware ရှာရာမှာ ကူညီပေးမယ့် Huawei Firmware Search Engine
Firmware ရှာတာ Pro တွေအတွက်တော့ လွယ်ကူတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို မိုလ်ဘိုင်းလောကထဲဝင်ကစ လူတွေအတွက်တော့ ခက်ပါတယ်... ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်က Y320-U01 လေးကို Firmware ရှာတာ မူးနောက်သွားလို့ ဆိုပြီးတော့ လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ Search engin လေးကို Developer Ko Kyaw Swar Thwin နှင့် Designer Green Like Orange တို့ဖန်တီးထားသော ဆော့ဝဲလ်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းလေးကလည်းလူကွယ်ပါတယ်။ ကိုကျော်စွာသွင် ညွှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းသာ လုပ်လိုက်ပါ အောက်မှာ တစ်ခါတည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ blog တွေမှာ မိမိ blog ကိုလာရောက်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မှာလိုတာ ပြောလိုတာ အကြံပေးလိုတာ စသည်ဖြင့် စကားချန်ခဲ့လို့ရတဲ့ blogger တိုင်းလိုလို အသုံးပြုကြတဲ့ Cox ထည့်သွင်းနည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Cbox လာရောက်ရေးသားထားတဲ့ မိမိမကြိုက်သည့် Comment ကို ဖျက်ပြစ်ပုံကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အရင်ဆုံး Cbox ကိုထည့်သွင်းဖို့ cbox.ws မှာ Sing Up အရင်လုပ်ရပါမယ်။
Huawei ဖုန်းတွေ Bootloader Unlock လုပ်တဲ့အခါ Product ID လိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ Product ID ကြည့်မရဖြစ်တာလဲ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီ Tool လေးကတော့ ဖုန်းအမျိုးအစားနှင့် IMEI သိရုံနဲ့ Product ID ကို Generator လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသိပညာတိုးပွားစေမယ့် ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားကို မိတ်ဆွေတို့ကို ကြည့်စေချင်လို့ Youtube မှာတင်ထားပါတယ်။ လက်ရှိကြည့်သူဦးရေ 1100 ကျော် Like အရေအတွက် 25 ရှိပါပြီ။ ဒီကားလေးက အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို တိုးပွားလာစေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအဆန်းလေးပါ ( ဘုရားကို တရားဆွဲတဲ့ဇာတ်ကား ) ဘုရားကို တရားရုံးမှာ အမှုဖွင့် တရားဆွဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းလို့ လူသိများပါတယ်။ မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို ကြည့်ရှု့သင့်ပြီး မကြည့်ရသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့် Download ယူပြီးကြည့်ကြည့်ပါ အလကားမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ အပြည့်အ၀ အာမခံပါတယ်။
မိမိကွန်ပျူတာမှာ ၀င်ရောက်လာတဲ့ Spyware, Adware, Malware, Trojans, KeyLoggers, Dialers, Hi-Jackers တွေကို detect and remove လုပ်ပေးမယ့် SUPERAntiSpyware Professional ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... မူရင်းဆိုက်ကို အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://www.superantispyware.com ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ keygen ထည့်ပေးထားပြီး Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်။
Blog မှာ Facebook Like Box ထည့်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Facebook Like Page တစ်ခုရှိရပါမယ်။ မရှိသေးရင် ဒီနေရာမှာ https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Like Page လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် မိမိ Blog မှာ FB Liek Box ထည့်သွင်းဖို့အတွက် ဒီနေရာကို https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box သွားရပြီး အောက်ကမှာ ပုံဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Facebook Page URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိ Facebook Like Box လိပ်စာကို ထည့်ပါ။ Width နှင့် Height မှာ မိမိအသုံးပြုလိုသည့် ဆိုက်ကို ဖြည့်ပြီး Get Code ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံမှာ မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ Hardware သမားတွေ လိုအပ်ရင်ဆောင်ထားလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Windows 8 အသုံးပြုသူများ Activate လုပ်ဖို့ Windows 8 Loader v1.7.9 Windows 8 Activation For all versions ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Win 8 အားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Activation of 100% of all copies of Windows 8 This crack is activated x86 (32-bit) Windows 8 x86 Windows 8 N x86 Windows 8 Pro x86 Windows 8 Pro VL x86 Windows 8 Pro N x86 Windows 8 Pro with Media Center x86 Windows 8 Enterprise x86 Windows 8 Enterprise N x86 x64 (64-bit) Windows 8 x64 Windows 8 N x64 Windows 8 Pro x64 Windows 8 Pro VL x64 Windows 8 Pro N x64 Windows 8 Pro with Media Center x64 Windows 8 Enterprise x64 Windows 8 Enterprise N x64 Activate Windows 8 Enterprise Activate Windows 8 Professional Activate Microsoft Office 2013 Activate Microsoft Office Visio 2013 Activate Microsoft Office Project 2013 Activate Microsoft Office 2010 Activate Microsoft Office Visio 2010 Activate Microsoft Office Project 2010 Activate Windows7Enterprise Activate Windows7Professional Activate Windows Vista Enterprise Activate Windows Vista Professiona Install:
WinToFlash 0.8.0000 Beta (WinToFlash ကိုသုံးပြီး USB Drive ဖြင့် Window တင်နည်း)
အရင်တင်ထားတဲ့ WinToFlash Download သေနေလို့ ပြန်တင်ပေးပါလို့ တောင်းထားတဲ့ မိတ်ဆွေအတွက် Version အသစ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Window ကို USB Drive ကနေတင်ဖို့အတွက် WinToFlash လေးက usb ကို ၀င်းဒိုးခွေ အသွင်ပြောင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် ... WinToFlash လေးက ဖိုင်ဆိုက်သေးပြီး သုံးရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ် ... USB ကလည်း4GB ဆိုလုံလောက်ပါတယ် ... တချို့ CD Drive မဖတ်တော့တာတို့မျိုးဆိုရင် ဒီနည်းလေးကအသုံးဝင်ပါတယ်... အောက်မှာလည်း ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ...